Blog of Nyein Chan Yar: 2010
video length: 6:57 min
Waihnin Pwint Thon speaks about Burma at the Labour Party conference today. Please watch this extraordinarily powerful and timely speech and forward to everyone, everywhere
I think the quality of this video on Facebook is better.
Posted by dathana at Thursday, September 30, 2010 No comments:
Labels: Burma, freedom, highlight, highlights, justice, Myanmar
၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေအရ စစ်တပ်ရဲ့ အရေးပါမှုက များတယ်ဘာညာ ဆိုတာလောက်ပဲ ကျွန်တော်တို့က သိကြတာ။ တကယ်က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကသာ အားလုံးကို ချုပ်ကိုင်သွားမယ့် သဘောပဲ ဆိုတာ BBC ရဲ့ "၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် အနာဂတ်" ဆိုတာ ဖတ်ပြီးမှ ကောင်းကောင်း နားလည်တယ်။ အဓိကအချက်လေးတွေကို copy-paste လုပ်ပြီး စုထားတာ အများအတွက်လည်း အကျိုးရှိနိုင်တယ် ထင်လို့ ဒီမှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်ရင်တော့ အပိုင်း ၅ပိုင်း (54321) ရှိပါတယ်။
Zawgyi-one version is here.
Unicode version is here.
Posted by dathana at Wednesday, September 01, 2010 No comments:
Posted by dathana at Thursday, July 29, 2010 No comments:
Posted by dathana at Wednesday, July 28, 2010 No comments:
Posted by dathana at Saturday, July 24, 2010 No comments:
Posted by dathana at Sunday, July 04, 2010 No comments:
Speech of Waihnin Pwint Thon at Labour Party confe...